‘केही साथीहरु नयाँ शक्तिलाई छिरल्न खोज्दै हुनुहुन्छ’  OnlineKhabar
‘केही साथीहरु नयाँ शक्तिलाई छिरल्न खोज्दै हुनुहुन्छ’
जलेर बस्नुभन्दा मन लागेको पार्टीका गए हुन्छः दाहाल
२९ असार, काठमाडौं । नयाँशक्ति पार्टी नेपालका संसदीय मामिला प्रमुख रहेका केशव दाहाल नेतामात्र होइनन्, राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखकसमेत हुन् । नेकपा एमालेका पूर्वनेता दाहालले इटहरीका अर्का सहकर्मी डम्बर खतिवडासँग मिलेर केही वर्ष अगाडि ‘वैकल्पिक विचार मञ्च’ गठन गरेका थिए । पछि एमाले नेताद्वय खतिवडा र दाहाल डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति पार्टीमा समाहित भए ।
स्थानीय निर्वाचनपछि नयाँशक्ति पार्टीमा एक प्रकारको निराशा देखिएको छ । केही पूर्वमाओवादी नेताहरु प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा र्फकन थालेका छन् भने केही र्फकने लाइनमा रहेको चर्चा छ । स्वयं डा. बाबुराम भट्टराईले समेत संयोजक पद नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको चर्चा बजारमा आएको छ ।
यही परिवेशमा हामीले राजनीतिक विश्लेषक एवं नयाँशक्ति पार्टीका नेता दाहालसँग अब नेपालमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको भविश्य कस्तो छ भन्ने विषयमा लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरेका छौंः
तपाईहरुले नयाँ शक्ति पार्टी बनाउनुभन्दा पहिले नै इटहरीमा ‘वैकल्पिक विचार मञ्च’ गठन गर्नुभएको थियो । अहिलेको चुनावमा इटहरीमा तपाईहरुको खासै प्रभावकारी भूमिका देखिएन । कहाँनेर असफल हुनुभयो ?
वैकल्पिक विचार मञ्च असफल भएको होइन । जतिखेर माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलन सम्पन्न भयो र हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा गयौं, राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेण्डाहरुमा बहस पनि सुरु भयो, त्यसबेला हामीलाई के लाग्यो भने यसबारेमा एउटा बिहंगम बहसको खाँचो छ ।
खासगरी नेपाली राजनीतिमा चलिरहेका विचार पद्दतिहरु के हुन्, ती विचार पद्दतिहरु कहाँनेर ठीक छन् र कहाँनेर तिनीहरुले नेपालको इतिहासलाई योगदान गरे ? कहाँनेर तिनीहरुको सीमा सकियो र अझ अगाडि जानका लागि हामीले कस्तो नयाँ विचार पद्दति समात्नुपर्छ ? यसमा हामीले छलफल गर्‍यौं ।
दोस्रो कुरा, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरु बन्ने प्रक्रिया एवं उनीहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र र संरचनागत आयामहरु जे छन्, त्यही संरचनाबाट राजनीतिक पार्टीहरु बन्ने र ती पार्टी पार्टीहरुले नेपाली समाजको, नेपाली अर्थराजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्छन् ? यी प्रश्नहरुमाथि अलि धेरै समीक्षा आवश्यक छ भन्ने हाम्रो दोस्रो एजेण्डा थियो ।
र, तेस्रो हाम्रो एजेण्डा चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रममा थियो । यसमा हाम्रो प्रश्न के थियो भने नेपाल किन बनेन ? नेपालको आधुनिक इतिहासको कुरा गर्ने हो भने ००७ सालदेखि यता आउँदा हामीले ५०/६५ वर्ष त बिताइसक्यौं । उस्तै-उस्तै कालखण्डमा एउटा क्रान्ति सम्पन्न गरेका मुलुकहरु हाम्रै आँखा अगाडि छन् । भारत छ, चीन छ, सिंगापुर छ, मलेसिया छ । अरु पनि धेरै देशहरु छन्, जसले २० /३० वर्षमा आर्थिक विकास गरे, मानवीय सूचकांकहरु धेरै माथि पुर्‍याए । हामीले किन विकास गर्न सकेनौं ?
यसको एउटा कारण चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमहरु नेपालको परिवर्तन, विकास र सम्वृद्धिका जुन एजेण्डलाई पक्रनुपर्ने हो र जस्तोखालका राजनीतिक कार्यक्रमहरु आवश्यक छन्, त्यो चाहिँ हुन सकेन । त्यसैले विचार पद्दतिमा, पार्टी निर्माण र यसको संरचनाभित्र परिवर्तनका कार्यक्रमहरु बनाउने कुरामा विहंगम समीक्षा आवश्यक छ र त्यसको समीक्षा गर्दै वैकल्पिक विचारको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर इटहरीबाट सुरु गरिएको त्यो एउटा वृहत बहस थियो ।
वीचैमा डा. बाबुराम भट्टराईसँग तपाईहरु मिल्न जानुको कारण चाहिँ के थियो ?
यसरी छलफल गर्दैगर्दा हामी काहीँ न काहीँ एउटा परम्परागत राजनीतिक शक्तिसँग सन्तुष्ट थिएनौं । र, अब विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै थियौं । विकल्प खोज्नका लागि दुईवटा बाटा थिएः
एउटा त लेख्ने पढ्ने र वौद्धिक चिन्तन गर्ने । र, अर्को राजनीतिक पार्टी बनाउने र त्यो पार्टीबाट व्यापक प्रयोग गर्ने । वौद्धिक चिन्तन मात्रै नगर्ने कि त्यसलाई एउटा प्रयोगबाट, राजनीतिक पार्टीबाट प्रयोग गर्ने ।
बहसमात्रै गर्नुभन्दा प्रयोग गर्दा वैकल्पिक राजनीति निर्माणका लागि अझ राम्रो हुन्छ भनेपछि हामी प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा गयौं । राजनीति पार्टी बनाउने भन्ने कुरामा गइयो । यसरी जाँदाखेरि डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि हाम्रो कुराकानी भयो र नेपालमा एउटा वैकल्पिक राजनीति निर्माणका लागि इमान्दार प्रयत्न गरौं भन्ने निश्कर्षमा पुगियो । यो कुनै पुराना पार्टीहरुको विरोधको वा उनीहरुबाट निराश भएर निस्केको जमातको प्रयत्न होइन कि वास्तवमै मुलुकमा एउटा नयाँ युगलाई नेतृत्व गर्नका लागि अलि उदात्त, अझ धेरै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र अझ धेरै समुन्नत समाजवादमा विश्वास गर्ने पोलिटिकल पार्टी बनाउने हामीले अठोट गर्‍यौं, जसले सुशासनको कुरा गरोस् । सदाचारको कुरा गरोस् । पार्टीभित्रको उन्नत लोकतन्त्रको कुरा गरोस् र मान्छेले हेर्दाखेरि पनि आनन्द आओस् । त्यस्तो एउटा राजनीतिक पार्टीको परिकल्पना गरेर अगाडि बढौं न त भन्ने भावनाबाट हामीले यो पार्टी बनाउन प्रयत्न गरेका हौं । हामी बाबुरामजीसँग आएको पनि हैन, हामी सबै मिलेर एउटा पोलिटिकल पार्टी बनाउन खोजेको हो ।
कतिपय साथीहरुलाई के लाग्छ भने यिनीहरु बाबुराम भट्टराईसँग आए । तर, हामी कोही कसैसँग आएका होइनौं । हामीले मिलेर एउटा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी बनाऔं भनेर आएका हौं । र, यो एक वर्षको यात्रा विशुद्ध यही अभिष्टबाट अगाडि बढिरहेको छ ।
तर, तपाईहरुको अभियान आफ्नै कर्मभूमि इटहरीमै किन प्रभावकारी हुन सकेन ? अहिलेको चुनावले पनि त्यस्तै संकेत गरेको देखिन्छ…
यसका दुई/तीनवटा कारण छन् जस्तो लाग्छ मलाई । एउटा, इटहरीमा मात्रै प्रभावकारी हुन सकिएन भन्दा पनि राष्ट्रिय परिदृश्य के हो, त्यसले पनि फरक पारिहाल्छ । किनभने एउटा व्यक्ति प्रभावकारी भयो भएन भन्ने कुरा रहेन अब । हामी नयाँ शक्ति पार्टीमा रहिसकेपछि पार्टी आफैं कति प्रभावकारी भयो, स्वाभाविक हिसाबले त्यसको प्रभाव इटहरीमा पनि देखिने हो ।
हाम्रो पार्टीले नै कुनै स्टेपहरु आशातीत ढंगबाट अगाडि बढाउन सकेन । यसले गर्दा देशभरि नै आशातीत प्रभाव देखिएन । हुन त एकवर्ष मात्रै भयो हामीले पार्टी बनाउन सुरु गरेको । वीचमा चुनाव चिन्हको समस्या भयो । अरु धेरै पोलिटिकल लफडाहरुमा हामी फस्यौं । यसैकै ‘रिफ्लेक्सन’ हो, इटहरीमा पनि हामी प्रभावकारी हुन सकेनौं ।
जहाँसम्म व्यक्तिगत रुपमा पनि पहल गर्न सकिन्थ्यो होला, तर विगत एक वर्षदेखि हामी काठमाडौंमै रह्यौं । पार्टी निर्माणमा राष्ट्रिय तहबाट योगदान गरौं भनेर हामी आयौं, यसले चाहिँ इटहरीमै केन्दि्रत भएर हामीले काम गर्ने अवसर मिलेन ।
तेस्रो कुराचाँहि कहिलेकाँहि नेपाली राजनीतिको यो हेजीमोनी कांग्रेस, एमालेजस्ता पार्टीहरुमा यसरी मुखरित भयो कि त्यो वर्चश्व तोड्न सानो तागत र प्रभावले सम्भव हुने देखिएन । त्यसैको प्रभाव इटहरीमा पनि हो र देशैभरि पर्‍यो ।
स्थानीय चुनावमा जनताको मुख्य रोजाइ एमाले र कांग्रेस नै देखियो । तेस्रो विकल्पका रुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई नै रोजेको देखियो । अब कांग्रेस र एमालेको विकल्प प्रचण्ड नै हुनेजस्तो देखियो । यो अवस्थामा तपाईहरुले बनाउन खोजेको नयाँशक्तिको औचित्य कहाँनेर बाँकी छ अब ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हामीले वृहत्तर राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरुलाई पक्डिएर हेर्‍यौं भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी एउटै पार्टी हुन् । यी पार्टीहरुमा धेरै तात्विक फरक छैन । नेताहरुका भाषण सुन्दा, दस्तावेजहरु हेर्दा काहीँ न काहीँ फरक छ कि जस्तो त लाग्छ, तर उनीहरुको राजनीतिक संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने यी तीनवटै एउटैखाले पार्टीहरु हुन् । यी पार्टीहरु एउटा अर्कोको विकल्प हुन सक्दैनन् । नयाँ विकल्प बनाउनैपर्छ ।
त्यसैले यो प्रश्न जिवित छ । नयाँ पार्टीको औचित्य सकिएको छैन । नयाँ वैकल्पिक पार्टी बन्नुपर्छ । तर, प्रश्न चाहिँ के आउँछ भने वैकल्पिक पार्टी भनेरमात्रै बनाउने हो कि साँच्चै व्यवहारमै जनताले खोजेजस्तो पार्टी बनाउने ? यस प्रश्नमा बहस आवश्यक छ । तर, यी तीनवटै दलहरु वैकल्पिक पार्टीहरु हैनन् । नेपालमा वैकल्पिक पार्टीको आवश्यकता छ । संसारभरि नै छ ।
नेपाली कांग्रेसले भनेको जस्तो मोडेलको प्रजातज्त्रको युग सकियो । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, समावेशी प्रजातन्त्रको युग आयो । हामीले संसारभरि नै यो बहस सुनिराखेका छौं । सुशासन र सदाचारको बहस अहिले संसारभरि नै चलिराखेको छ । नेपालका नयाँ हिसाबले राष्ट्रियताको परिभाषा गर्नुपर्ने, नयाँ हिसाबले विकास र सम्वृद्धिको कुरा गर्नुपर्ने युगमा हामी प्रवेश गर्दैछौं । यी पार्टीहरुले कहाँ यी कुरा गरिरहेका छन् र ? यी पार्टीहरु त परम्परागत पार्टीहरु नै हुन् । यिनीहरु एउटा अर्काको विकल्प हुनै सक्दैनन् ।
तर, प्रमुख दलहरुले नै चुनाव जितिरहँदा कसरी वैकल्पिक राजनीतिको ‘मार्केट’ फस्टाउला ?
राजनीतिक हिसाबले हामीले बहस गर्‍यौं भने अहिलेको युग, यो युगका पछिल्ला अन्तरविरोधहरु र ती अन्तरविरोध समाधान गर्नका लागि पुराना आइडियोलोजीहरुको सीमा सकियो । यसले पनि देखाउँछ कि एउटा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको, वैकल्पिक आइडियोलोजीको आवश्यकता छ ।
राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने के यही हो त एउटा वडाध्यक्षले चुनाव जित्नका लागि ५० लाख खर्च गर्नुपर्ने ? हामीले खोजेको राजनीतिक संस्कार यही हो त ? हामीले देखिराखेका छौं, एउटा नेता सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट छ । हामीले खोजेको यही हो त ?
हाम्रा युवाहरु अरबमा पसीना बगाइराखेका छन् । हाम्रा दलहरु एउटा वडाको चुनावमा ५० लाख खर्च गर्दैछन् । के यही हो त हामीले खोजेको नेपाली राजनीति ? के यही छल कपटबाट हामीले हाम्रो देशको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं ? त्यसैले यो चिजले त नेपालमा शालीन वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता छ भन्ने झन पुष्टि भएको छ ।
तर, म के भन्छु भने पुष्टि त भयो, तर बैकल्पिक भन्नेहरुले जनताले खोजेको जस्तो पार्टी दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? प्रश्नचाहिँ छ । तर, पुष्टि त भइसक्यो ।
नयाँशक्ति पार्टीले स्थानीय चुनावका विषयमा समीक्षा गरिरहेको होला । तर, सुरुमा पार्टी स्थापना गर्दा तपाईहरुको पक्षमा जुन माहौल देखिएको थियो, त्यसलाई बचाउन नसक्नुभएको हो ? कि होइन ? सुरुमा तपाईहरुले तरंग ल्याउनुभएको थियो, पछि लफडामा पर्दै जानुभयो । रामेश्वर खनाल, मुमाराम खनालहरुले पार्टी छाड्नुभयो । अहिले देवेन्द्र पौडेलहरु पनि पुरानै घरमा फर्किने भन्ने हल्ला सुनिँदैछ । यो के भएको हो ? तपाईहरु कहाँनेर असफल हुनुभयो ?
मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी के गर्दैछौं, नेपालमा वैकल्पिक राजनीति निर्माणको महत्व र गरिमा के हो, यसलाई वोध गर्ने र आत्मसाथ गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ, सबैमा उही लेबलको बुझाइ छैन ।
कतिपय साथीहरुलाई लाग्छ, नेपालमा मार्क्सवाद त आवश्यक छ नि, कहाँ मार्क्सवाद छाड्न सकिन्छ ? कम्युनिष्ट भएर यत्रो ३० वर्ष लागियो, अब कम्युनिष्टलाई छाड्नु ? बाहिर बैकल्पिक भने पनि उहाँहरुको मनमा चाहिँ वैकल्पिक त वैकल्पिक, तर कम्युनिष्ट वैकल्पिक भन्ने छ ।
हामीसँग अर्को पनि एउटा जमात हुन सक्छ, ०६२/०६३ पछि यत्रो उथलपुथल भो । यत्रो जातको कुरो गरियो । यत्रो जातीय मुक्तिको कुरा गरियो, पहिचानको कुरा गरियो । यो पनि कसरी छाड्ने ?
हामीले समृद्ध समाजवाद भन्यौं, समृद्ध समाजवाद भनेको एउटाले यो कम्युनिष्ट नै भनेको हो भन्छ । हामीले वाम लोकतन्त्र भन्यौं, एउटाले चाहिँ यो वाम भनेको त कम्युनिष्ट नै हो नि भन्दिन्छ । हामीले समावेशी भन्यौं, क्लष्टर भन्यौं, अर्कोले के बुझिदियो भने यो त जातीय पहिचानको कुरा हो नि । विकास समृद्धि ५ ‘स’ को मूल पक्ष हो, त्यसलाई अरु बाँकी चारवटा ‘स’हरुले योगदान गर्छन् भन्यौं हामीले । तर, मान्छेले कहाँ हुन्छ भनेर अर्को कुरा गरे ।
त्यसैले हामी एउटा उदात्त वैकल्पिक पार्टी निर्माणको जुन मिसनमा छौं, त्यो मिसनलाई वैचारिक राजनीतिक हिसाबले प्रष्टसँग बुझ्ने र त्यही हिसाबको आफ्नो सम्पूर्ण व्यवहार पद्दतिलाई ढाल्ने कुरामा हाम्रो थोरै कमी भयो । यो कमीले गर्दा जब हामी ‘कन्फ्युज्ड’ भयौं । यस्तो भएपछि स्वाभाविकरुपमा हाम्रो व्यवहार त्यो दिशामा जाँदैन । त्यसैको प्रभाव हामीमा देखियो ।
दोस्रो, हामीले उदात्त पार्टीको परिकल्पना गरेका हौं । हामीले लोकतान्त्रिक पार्टीको परिकल्पना गरेका हौं । हामीले असाध्यै अनुशासित, बोल्दा पनि दायाँवायाँ हेरेरमात्रै बोल्नुपर्ने पार्टीको परिकल्पना गरेका होइनौं । हामीले परिकल्पना गरेको त संयोजकलाई पनि कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन सक्ने पार्टी बनाउन खोजेको हो । हामीले भन्दै के भनेका हौं भने हाम्रो पार्टी अरुभन्दा यसकारणले फरक छ कि यहाँ कार्यकर्ताहरु सार्वभौम हुन्छन् । हामीले कार्यकर्ताको मातहतमा पार्टी बनाउने भनेका हौं । यो त धेरै ठूलो फरक कुरा हो नि त । यो सिद्धान्तको पार्टीले यसो यताउता हुनेवित्तिकै कारवाही गरिहालौं भन्दैन क्या Û तर, हामी अलि संकीर्ण हुने र कारवाहीतिर जाने दोस्रो यो कमजोरी भयो ।
बैचारिक राजनीतिक बुझाइमा पनि हामी तीनवटा/चारवटा धारमा बाँडियौं । अर्को, पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको बुझाइमा पनि हामी अलि संकीर्णजस्तो भयौं ।
तेस्रो चाहिँ संगठन प्रणालीलाई जुन लेबलबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, मान्छेलाई जुन लेबलबाट काम दिनुपर्ने थियो, पार्टीमा जुन लेबलको गतिशीलता आवश्यक थियो, त्यो हुन सकेन ।
यदि तपाईले उत्प्रेरित गर्नुभयो भने मान्छे भोकै हिँड्न तयार हुन्छ । उत्प्रेरित गर्नुभएन भने मान्छे अघाए पनि हिँड्दैन । यो उत्प्रेरित गर्ने कुरामा पनि आशातीत रुपमा काम गर्न सकिएन । केही व्यवहारिक समस्याहरु पनि भए ।
यी सबै समस्याहरुको परिणति के भयो भने हामीले पार्टी निर्माण गर्ने बेलासम्म जुनखालको आकर्षण दिन सक्यौं, विस्तारै हामीले केही स्टेपहरु ‘लुज’ गर्‍यौं । र, सुरुको आकर्षण हामीले कायम राख्न सकेनौं ।
अब नयाँशक्ति पार्टी चरम निराशातिर जान्छ कि फेरि अगाडि बढ्छ ? केही मान्छेहरु माओवादीमा र्फकन थालिसके…
चरम निराशामा जानुहुँदैन । म के भन्दैछु भने अब समग्र समीक्षा गरौं । समीक्षामात्रै होइन, सम्पूर्ण समीक्षा गरौं । चुनाव हारियो भनेर समीक्षा गरौं भनेको होइन । चुनाव त जित्ने हार्ने आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा नयाँ पार्टी, विभिन्न सीमाहरुबाट हामी चुनावमा सहभागी भयौं । तर, पार्टी स्थापनाको एक वर्ष भयो । हामीले एक वर्ष बितायौं, अब समीक्षा त गर्नुपर्‍यो नि ।
त्यसैले म के भन्छु भने सम्पूर्ण समीक्षा गरौं र सम्पूर्ण पुनर्गठन गरौं । विचार, हाम्रो दैनिक व्यवहार र नेतृत्व विकास र जिम्मेवारी लगायत सबै कुरामा समीक्षा आवश्यक छ ।
अब अगाडि बढ्ने हो भने अब हाम्रा आन्तरिक कमजोरीहरु हटाउनुपर्छ । तपाईको अनुहारमा फोहोर छ भने ऐनामात्रै सफा गरे केही पनि पाउनुहुन्न । त्यसैले पहिले हामीले अनुहारको धुलो सफा गर्नुपर्छ । त्यसपछि चित्र स्पष्ट बनाउनलाई ऐना पनि सफा गरौं । त्यसपछि बाह्य फ्याक्टरहरुलाई कसरी आफ्नो अनुकूल लाने, त्यसमा छलफल गरौं ।
अहिले हामी समीक्षामा छौं । यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं । पछाडि र्फकने त कुरै छैन । बिग्रेको के छ र पछाडि फर्किने ? पार्टी बनाएको एक वर्ष भयो । हामी चुनावमा सहभागी भयौं । हाम्रा एजेण्डाहरु जनताका वीचमा लग्यौं । हामीले गर्वसाथ सगरमाथा चढ्न खोजेको हो । सगरमाथा चढ्दा कहिलेकाँहि भनेकै मितिमा चढ्न सकिँदैन । बेसक्याम्प फर्कौं, फेरि छलफल गरौं अनि फेरि चढौं । सगरमाथा चढ्ने मान्छे म असफल भएँ भनेर निराश हुनुपर्ने के कारण छ ?
चुनाव सकिएलगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभएको हो ?
हैन । हामी दोस्रो चरणको चुनावपछि एक सातासम्म बाबुरामजीसँगै छौं । हामी छलफल गरिराखेका छौं । यो सबै छलफलमा उहाँले भनेको एउटै कुरा हो, नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको खाँचो छ र यो खाँचोलाई पूरा गर्नका लागि यो कार्यभार हामीबाहेक अरुले बोक्न सक्दैन । यसका लागि म अहिले ६२ वर्षको भएँ, ७० वर्षसम्म म नेतृत्व गर्छु, मलाई तपाईहरुले साथ दिनुपर्छ ।
तर, बाबुरामजीले नेतृत्व छाड्न लागेको चर्चा बजारमा कसरी आयो त ?
मलाई लाग्छ, जो साथीहरुले यस्तो कुरा ल्याउनुभयो, या त उहाँहरु नियतवस यही पार्टीभित्र नेतृत्व प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र एकचोटि टेस्ट गरौं न त भनेर ल्याउनु भो । कि त साथीहरु यो पार्टी फेरि एकखालको भ्रम सिर्जना गरेर छिरल्न खोज्दै हुनुहुन्छ । नत्र डाक्टर साहेबले त्यो भनेको मलाई थाहा छैन ।
हाम्रो टीमभित्र भएको कुरा के हो भने उहाँ अझै ५/७ वर्ष यो पार्टीभित्र नेतृत्व गर्ने र अगाडि जाने भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्छ । अझ बाबुरामजीले साथीहरुलाई उत्साह थप्दै भनेको कुरा के हो भने जिसस क्राइस्ट मर्दाखेरि उनीसँग एक जनामात्रै चेला थिए । अहिले क्राइस्टलाई मान्नेहरु संसारमा कति छन् ? कार्ल मार्क्सको समाधिमा ११ जना मान्छेहरु सहभागी थिए । तर, पछि लाखौं मान्छेहरु मार्क्सवादको रक्षाका लागि लडे र मरे । त्यसैले विचार भन्ने कुरा कहाँ त्यसरी सजिलै स्थापित हुने कुरा हो र ? विचारलाई स्थापित गर्नका लागि कहाँ एक वर्षमा आत्तिने कुरा हो र ?
उसोभए स्थानीय चुनावपछि नयाँशक्ति पार्टीभित्र केही मानिसहरु आत्तिन थालेका हुन् ?
म के भन्छु भने माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरु जो आउनुभयो, अथवा हामी सबै आ-आफ्नो पृष्ठभूमिबाट जो आयौं, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त के हो भने एउटा राजनीतिक धार अर्थात जनयुद्धमा सहभागी भएका साथीहरुको बुद्धतिरको यात्रा हो । मण्डेला बन्ने यात्रा हो डा. बाबुराम भट्टराईको । यो महत्वलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अहिले नै एक वर्ष नपुग्दै गज्याङ र गुजुङ गर्ने बेला भएको छैन । नयाँशक्ति बन्दैन पो क्यार, अब अर्को पार्टीतिर पो जाने हो कि, माओवादीतिरै फर्किन्छु, अथवा एमालेतिर फर्किन्छु भन्ने बेला कहाँ भएको छ र ?
नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको महत्वलाई वोध नगर्ने हो भने चुनाव हारियो, बर्बादै भो, सत्ता प्राप्त भएन, कुर्सी नै गुम्यो लाखौं मान्छेले मलाई चिन्थे, हजारौं मान्छेमा भाषण गर्थें, अहिले त कार्यकर्ता पनि छैनन् भनेर निराश हुने हो भने त त्यो अर्को कुरा हो । तर, राजनीतिमा धैर्यता पनि चाहिन्छ ।
चुनाव हारेकाले निराशा आएको हो कि ?
हामीले के हारेका छौं र ? एउटा शुन्यबाट बैकल्पिक पार्टी बनाउने भनेर लागेका मान्छेहरुका लागि यो हार होइन । हामी जे भन्दैछौं, त्यो आफैं जित हो । नेपाली राजनीतिमा नयाँ विकल्प निर्माण गरौं, एउटा सुन्दर राजनीति दिऔं भन्दैछौं । यो आफैंमा जित हो । हामी अरुभन्दा एक स्टेप अगाडि छौं । र, अझै अगाडि जानुपर्छ ।
तपाई राजनीतिज्ञमात्रै नभएर राजनीतिक विश्लेषक र लेख पनि हुनुहुन्छ । यो चुनावमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले आफ्नो तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको देखिन्छ । निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको पार्टीले आफूलाई बचाएको देखिन्छ । तपाई अब माओवादी केन्द्रको भविश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
चुनावी अंकगणितका आधारमा त साथीहरु तेस्रो पार्टी हुनु भो । कतिपय मान्छेले यस्तो आशा गरेका थिएनन् । मलाई लाग्छ, माओवादीभित्रै पनि यो आशा थिएन होला । तर, उहाँहरुले जुन तरिकाबाट शक्ति आर्जन गर्नुभयो, त्यो बेठीक छ । खर्चिलो तरिका उहाँहरुले अपनाउनुभयो । यस्तो तरिका दीगो हुँदैन ।
दोस्रो, वहाँहरुको एजेण्डा के हो ? यसले उहाँहरुलाई स्थापित गर्दैन । सैद्धान्तिक हिसाबले अब माओवाद भन्ने चिजको त के युग छ र ?
त्यसैले यो चुनावमा एउटा झल्को, एउटा चटकजस्तो त भयो । तर, यो चटक सधैं काम लाग्दैन । उहाँहरुले आफूलाई ठूलो रिर्फम गर्नुपर्छ । उहाँहरु ठूलो पार्टी बन्नुहोला, जित्नु पनि होला, तर देशलाई फाइदा छैन ।
म हाम्रा साथीहरुलाई पनि भन्छु, हिजो हामी ठूलो पार्टीमै थियौं नि । बाबुराम भट्टराई माओवादीमा, ठूलो पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो । माओवादीबाट आउनुभएका साथीहरु ठूलो पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो । हामी केही साथीहरु एमालेमा थियौं । हाम्रो आफ्नै पार्टी ठूलो थियो । त्यसैले यो ठूलोको लडाइँ होइन । हामीले त एउटा गर्वशाली पार्टीको विकास गरौं भनेका हौं नि त । त्यो आशा गरेजस्तो भएन होला, त्यो भोलि हुन्छ । आजै हामी निराश हुनुपर्ने केही छैन ।
तर, चुनावलगत्तै नयाँ शक्ति पार्टीमा आएका पूर्वमाओवादीहरु आफ्नै घरतिर फर्कने सम्भावना पनि त देखिन थाल्यो नि ?
साथीहरु शक्तिकै पछि लाग्न खोज्नुभएको हो भने केही भन्नु छैन । बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एउटा पार्टी बन्छ र यसो गज्याङ गुजुङ गरेर खान पाइएला, हिजो उता खान पाइएको थिएन भन्नेखालको हाम्रो अभिष्ट हो भने चाहिँ त्यो त पाइँदैन यहाँ । ८/१० वर्ष अझै नपाइएला । त्यस्ता साथीहरु जाँदा पनि हुन्छ ।
साथीहरुलाई निद्रा लाग्दैन, खत्तम भइयो भन्ने लाग्छ र मन सम्झाउँदा काहीँ सम्झाउने ठाउँ छैन, श्रीमतीले पनि कचकच गरेका छन्, छोराछोरीले पनि कचकच गरेका छन् भने यस्तो बेलामा यो पार्टीमा साथीहरु कसरी बस्ने ? पाप गर्नुहुँदैन, उहाँहरु जाँदा हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रतिर र्फकन खोज्नेहरुलाई विदा गर्न तयार भएर बस्नुभएको छ कि क्या हो ?
नयाँ शक्ति उन्नत लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । हामीले सुरुमा नै के भनेका थियौं भने वैकल्पिक पार्टी बनाऔं, हामीले डकुमेन्टमा त लेखेनौं, तर हाम्रो वीचमा छलफल भएको थियो, यो पार्टी छाडेर जाने मान्छेलाई पनि फूलमाला लगाएर विदा गर्न सकियोस् । र, भनियोस् के भने साथी, तिमीसँग एक वर्ष सँगै बसियो, एक वर्षसम्म यो पार्टी बनाउनमा तिम्रो पनि योगदान छ । बाँकी तिम्रो भविश्य उज्जवल रहोस् ।
यसो भन्दै माला लगाएर, अवीर लगाएर विदा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यद्यपि हामी यो ‘प्राक्टिस’मा गएनौं । तर, यति उदात्त पार्टी बनाऔं भनेर छलफल गरेका थियौं हामीले ।
त्यसैले कोही साथीहरु पार्टी छाडेर जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई रोक्ने त कुरै छैन । उहाँहरुलाई हामीले गाली गर्नै हुँदैन । हामीले गाली गर्ने पार्टी बनाउन खोजेकै होइन । मान्छेलाई एकदमै हीनतावोध हुने पार्टी बनाउन खोजेकै होइन । म त बर्बाद भएँ भनेर जलेर बस्नुपर्ने पार्टी बनाउन खोजेको होइन । कसैलाई यस्तो लाग्छ भने तपाई उड्नोस् । हामी एउटा आकाशमा उडौंला, तपाई अर्को आकाशमा उड्नोस् ।
जो साथीलाई कम्युनिष्टप्रतिको मोह छ, कम्युनिष्ट पार्टीहरु धेरै छन् । जो साथीहरुलाई पहिचानको मोह छ, पहिचानको कुरा गर्ने पार्टीहरु धेरै छन् । जसलाई वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको मोह छ, बसौं । डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा कम्तिमा हामी केही समय यो बहसमा जानुपर्छ । उहाँलाई पनि म सर्वेसर्वा भन्दिनँ, उहाँ पनि हाम्रो टीमभित्रको एक नेता हो । तर, अहिले बाबुरामजीको नेतृत्व आवश्यक छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय फोरमसँग पार्टी एकताको तयारी कहाँ पुग्यो ?
उपेन्द्र यादवजीहरुसँगको पार्टी एकता हाम्रो एउटा आवश्यकता पनि बन्यो । वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी बनाउने कुरामा विचार मिल्ने, मन मिल्नेहरु एक बनौं भन्ने त स्वाभाविकै कुरा हो । सम्भव हुन्छ, एकीकरणै होस्, सम्भव भएन भने तालमेल गरौं, मोर्चा बनाऔं भन्ने हो ।
तर, वैकल्पिक पार्टी बनाउने कष्टमा उहाँहरुसँग आजकै मितिमा जस्ताको त्यस्तै स्थितिमा एकता हुँदैन । वैकल्पिक पार्टी बनाउने हाम्रो जुन मिसन छ, त्यसले यही अवस्थामा लोकतान्त्रिक फोरमसँग पनि मिल्ने, राजपासँग मिल्ने, माओवादीसँग पनि मिल्ने, यस्तो हुँदैन । मिल्ने भनेको कसरी मिल्ने ? त्यस्तो हो भने त हामी पुराना पार्टीजस्तै भइहाल्यौं नि ।
अहिले हेर्नोस् त, एमाले राप्रपासँग मिलेको छ, कांग्रेस माओवादीसँग मिलेको छ । मिल्ने पनि त धर्म हुन्छ नि । त्यो धर्मको केन्द्रीय विषय के हो भने वैकल्पिक पार्टी, वैकल्पिक राजनीति । उदात्त लोकतन्त्र, समृद्ध समाजवाद । सुशासन, सदाचार । यी आधारभूत विषयलाई कमजोर बनाउने गरी कसैसँग पनि हाम्रो न एकता हुन्छ, न कार्यगत एकता हुन्छ ।
बरु त्यहाँभित्र पनि छलफल गरौं न त । जस्तो- एमालेभित्र पनि घनश्याम भुसालजीहरुले लामो समयदेखि बहस गरिरहनुभएको छ । छलफल गरौं न त के हो उहाँहरुको कुरा ? नेपाली राजनीतिलाई कसरी उहाँहरु अगाडि लान चाहनुहुन्छ ? कांग्रेसभित्र पनि असल साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग पनि छलफल गरौं । असल मान्छेहरुका वीचमा छलफल चलाऔं ।
त्यसैले, वैकल्पिक पार्टी बनाउने हाम्रो पहिलो शर्त हो, यसलाई डोमिनेट हुने गरी न हामी तालमेल गर्छौं, न पार्टी एकता गर्छौं । बरु छलफलचाहिँ त्यहाँभित्रका असल मान्छेहरुसँग निरन्तर जारी राख्छौं ।
तपाईहरुजस्तै नयाँ भनिएका रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टी र उज्जल थापाको विवेकशील नेपालीसँग तपाईहरु मिल्न नसक्नु र पानी बाराबार गर्नुको कारण के हो ? उनीहरु पनि त वैकल्पिक राजनीति नै भनिराखेका छन्…
हामीवीच ‘इगो’ राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । वैकल्पिक पार्टी भनेकै वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको कुरा हो । यो भनेको गालीगलौच र इगोको कल्चर होइन । यो त उदात्त, एउटाले अर्कोलाई सम्मान गर्ने संस्कार हो ।
जहाँसम्म वैकल्पिक पार्टीहरुभित्रको ध्रुवीकरणको कुरा हो, मलाई कस्तो लाग्छ भने यसभित्र तीनवटा चिज छन्ः
एउटा- हामी सबैले म मात्रै वैकल्पिक हो भन्नुहुँदैन । यो भ्रमबाट विवेकशील र साझा पार्टी पनि मुक्त हुनुपर्छ कि ममात्रै वैकल्पिक हो । हामी सबै वैकल्पिक हुनुपर्छ ।
दोस्रो- नेपालमा कम्युनिष्टहरुले जस्तो आ-आफ्नो गुट र पार्टी बनाएर बस्ने जुन कल्चर छ, हामी त्यस्तो हुनुहुँदैन ।
तेस्रो- हामीभित्र के छलफल चल्नुपर्छ भने वैकल्पिक भन्ने पार्टीहरुभित्र एकीकरणको कुरा पछि होला, तर कम्तिमा एउटा साझा फोरम बनाऔं । वैकल्पिक पार्टी फोरम अथवा वैकल्पिक राजनीतिक फोरम बनाऔं । यो फोरममा नयाँशक्ति पनि होस् । विवेकशील र साझा पार्टी पनि होस् । यो फोरममा नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि हुन् । लेखक, चिन्तकहरु पनि हुन् । यसमा हामी उदार हुनुपर्छ । अन्यथा ‘मेरो मात्रै’ भन्ने हो भने यो त पुरानै पारा हुन्छ ।
हामीले त गर्ववोध हुने पार्टी बनाउन खोजेका हौं । गर्व भयो भने १० वटा चुनाव हारे पनि केही फरक पर्दैन । गर्ववोध गर्ने पार्टी बनाउन सकियो भने चुनाव जितिन्छ । तर, धैर्य गर्नुपर्छ, राजनीतिमा एक वर्ष भनेको त केही पनि होइन ।
२०७४ असार २९ गते २०:४३ मा प्रकाशित (२०७४ असार ३० गते ७:४६मा अद्यावधिक गरिएको)
durga shrastha लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १०:१२
Dr.d. babu ram ko saman garchhu tara jun party ma lagera raj niti garnu janta ka lagi ho d.babu ram g le maobadi parityag garera naya sakti nepali namak party kholnu bho yo bastam ma thikai ahile aayra naya pusta lai hastantarn garne bhanne halla jahej haina yasma yasto artha lagx party bechne ra pheri arko khole
JB Karki लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १०:५९
Analysis, thought, discourse etc. are superb; but practice in field and results! More or less zero! How long time isayear? Well, it depends on whether you’re busy in something good or idle for nothing.
Bishwontar Sukubhatt लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते ११:०९
दलको नाम नयाँशक्ति राखेर के हुन्छ त । जनताले चुनावमा लोप्पा खुवाइसके, तैपनि धाँकरवाफ देखाउंदो रैछ यसका नेताहरुले । नयाँशक्ति होइन कि चौध शताब्दीको चौधौं शक्ति हुन जानेछ । विचरा करिस्माको चिन्ता पो लाग्न थाल्यो त ।
Rajan Pandey लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १२:०३
All old faces was not new since its conception and shakti we saw in2stages of local elections. So, pls. close down this shop.
No customers are buying in your idea.
रिकेश शर्मा लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १२:२७
राजनीति सिधान्तबाट निर्देशित हुन्छ केशवजी
आफुनै “न भुई” “न भाडो” को सिधान्त लिय पछि मनको लड्डु धिउसंग जत्ति पनि खान पाईन्छ है
buddhi लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १३:२४
Jesus christ ko jasto niyet ra jiban hunu parchha yo new force(naya shakti)ma ani ek din sabai Nepali haru le pachhyauchha . Ma pani yesu ko chela hu naya shakti ko pani chela hunu sakchhu yedi ramro bhayo bhane. Praise Jesus Christ
Govinda लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १४:३०
Bichara Dahal Sir,
Jacket Add.ko Propoganda kati 6ito Bhuleko ?
Money le Matra Party hune vaye Naya Shakti …
akela लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १४:३९
केशब जी कुराको राम्रो खेति गर्ने मान्छे हुन् . आफ्नु कुरामा दम छ तर पाटिले भने गरि खाने लक्ष्ण देखिएन
kamesh Srivstava लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार २९ गते १५:०२
uttam vichar . satya lai sthapit garn samay lagn sackchh tar satya kahile pani hardain.
सुरेन्द्र बशिष्ठ लेख्नुहुन्छ | २०७४ असार ३० गते ८:०८
नेपालमा जुन किसीमले राजनैतिक परिवर्तन भयो । नेपाल र नेपालीले आर्थिक र सामाजिक विकासको फडको मार्नेछ भन्ने थियो । तर,पंचायती संस्कार भनौ वा सामन्ती संस्कार भन्दा माथी नेता भनाऊदाहरू जान सकेनन् । फलस्वरूप हिजो एउटा राजा थिए, आज १,००० जना भन्दा बढी राजा भए । हो, बैकल्पिक बिचार मन्चले पनि एउटा दिशा निर्देश गर्ला कि भन्ने भएता पनि फेरी तिनै बाबूराम भट्टराईको नया शक्तिमा बिलय हुनुले एउटा परिवर्तनको संकेत पनि पटाक्षेप हुन पुग्यो । बाबूराम डा०पदवीधारी हुने बित्तिकै सम्पूर्ण होइनन् । पदमा रहंदा उनीवाट भए गरेका कृयाकलाप ज्यादै आलोचित भएका थिए । पार्टी भन्दा ठूलो राष्ट् हुन्छ । सम्बिधान २०७२ जारी हुने दिनसम्म उनी त्यसको संरक्षक थिए । भोलीपल्टै आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्बिधानको बिरोधमा उत्रिनुले उनमा नैतिकताको संकट देखियो । हिजोको कथित मधेशी मोर्चाले सम्बिधानको बिरोध गर्नुको पछाडीको उद्देश्य के थियो र छ । त्यसले दूरगामी के असर पर्दछ भन्ने सही विश्लेषण गर्न पनि सक्नु पर्दछ । जुन नयाशक्ति नामक पार्टीमा देखिएन । बाबूरामजी र ऊनीसंग संलग्न व्यक्तिहरूनै संदिग्ध भए । अब हिजोको इतिहासले यसो भनेको थियो, उसो भनेको थियो,भन्ने हैन । बास्तवमा नेपाल र नेपालीको मूल समस्या के हो ? ऊ के चाहन्छ ? नेपालको आफ्नो छुट्टै पहिचान र स्वाभिमान कसरी कायम राख्न सकिन्छ ? नेपाली जनतामा रहेको सामन्ती सोचमा परिवर्तन ल्याउने उपायहरू के हुन् त ? यता तिर ध्यान दिएर मात्र हैन, सरकारवाट भएका विकृति र विसंगतिकार्यका विरुद्ध कसरी सशक्त ढंगले अगाडी बढ्नेहो ? यस तर्फ ध्यान दिएर लाग्यो भने मात्र तपाईहरूले लिनु भएको मिशन पूरा होला । नत्र नेता बनिरहने हो भने बेग्लै कुराहो ।